Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fampidiran-dresaka fampiraisana an'i Frida Kahlo | Salma Hayek: Natosiky ny fiainany taloha i Salma tamin'ny filalaovany ny filma amin'ny sarimihetsika «Frida» (2002) - Fikarohana Reincarnation
Ny fiainan'ny Frida Kahlo
Frida Kahlo dia teraka tamin'ny taona 1907. Tamin'ny faha-6 taonany dia voan'ny lefakozatra izy, ka nahatonga azy tsy hatory nandritra ny 9 volana. Taorian'ny nahasitranany dia tavela tamin'ny tongotra havanana marefo sy malemy izy. Rehefa niverina nianatra izy, dia nantsoin'ny mpiara-mianatra masiaka hoe "Frida-fehin-tànana".
Tamin'ny 18 taona i Frida dia voarohirohy tamin'ny lozam-pifamoivoizana izay nisy fiara fitaterana nitaingenany azy dia voadaroky ny arabe iray. Betsaka ny olona maty. I Frida no nahitana ratra tapaka, taolana ratra ary vertebrae nafindra. Notapahiny koa ny taolany sy ny tongony roa. Tany amin'ny hopitaly nandritra ny roa volana izy taorian'ity fifandonana ity ary nahatsapa fanaintainana mihemotra indray i Frida nandritra ny androm-piainany.
Tamin'ny 1950, fony izy 43 taona, dia nodidiana fandidiana taolana tamin'ny hazondamosina i Kahlo mba hanamaivanana ny fanaintainany. Mampalahelo fa nipetraka ny aretina iray ary voatery niaritra fandidiana maro izy.
Tamin'ny 1953, ny tongotra ankavanan'i Kahlo dia voatery notapahina teo amin'ny lohalika noho ny gangrene. Avy eo dia nanjary ketraka mafy sy nitebiteby izy, nampitombo ny mpamono fanaintainana opioid taloha ary rehefa ny vadiny, artista Diego Rivera, nanomboka tamin'ny raharaha iray hafa fampitahàna, nanandrana namono tena tamin'ny alalan'ny overdose izy.
Ny lazan'ny Frida'a amin'ny maha mpanakanto azy dia nitombo nandritra ny androm-piainany. Ny fampirantiana ny sangan'asany dia nitranga tamin'ny 1953, nalamin'ny namana iray izay nahatakatra fa tsy ela velona i Frida. Tsy maintsy nentina tany amin'ny fampisehoana nataony tamin'ny fiara mpamonjy voina izy ary tao amin'ilay fampiratiana dia napetraka teo am-pandriana iray izay nalamina ho azy i Frida.
Nanoratra tao amin'ny diariny izy tamin'ny Febroary 1954: “Nampijalijalina nandritra ny taonjato maro izy ireo, ary saika very fotoana tsy niniako. Te hamono tena foana aho. ”
Maty i Frida herintaona taty aoriana tamin'ny faha-47 taonany. Ny teniny farany dia: "Miandry am-pifaliana ny fivoahana aho - ary manantena ny tsy hiverina intsony - Frida"
Ny fiainana maneso an'i Salma Hayek
Tsy nahazo ny faniriany i Frida rehefa nanangana azy indray ho mpilalao sarimihetsika Salma Hayek, teraka tamin'ny 1966, 12 taona taorian'ny nahafatesan'i Frida. Soa ihany, feno hatsikana ny fiainan'i Salma, raha oharina amin'ny fangirifiriana naharetan'i Frida.
Salma Hayek dia nahazo mari-pankasitrahana isan-karazany. Mahaliana fa namorona ilay sarimihetsika biografika izy, Frida, izay navoaka tamin'ny 2002.
Ireo tranga fampidiran-tena momba ny fampitoviana misy an'i Halle Berry, Stan Laurel ary i Oliver Hardy
Noho izany, Frida dia nanatanteraka fampisehoana horonantsary momba ny fiainany taloha. Antsoiko ireo karazana tantaran'ny reincarnation ireo hoe "Affinity Cases," izay namoronan'ny olona asa iray mifototra amin'ny fahitana azy ireo taloha.
Raharaha reincarnation tena mitovy aminy dia misy ny mpandresy Oscar Halle Berry, izay namokatra ilay sarimihetsika Fampahafantarana an'i Dorothy Dandridge. Tamin'ny nofo taloha, Halle dia mpilalao sarimihetsika afrikanina-amerikana Dorothy Dandridge, izay nolavina ho Oscar noho ny lokon'ny hodiny. Ny tranga hafa dia misy ny firaisana amin'ny vatana vaovao ao amin'i Stan Laurel sy Oliver Hardy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovitovy ny endri-tarehin'i Frida Kahlo sy Salma Hayek.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Ny fikarohana reincarnation dia manambara fa ny olona dia mirona amin'ny fikarakarana mitovy amin'ny fiainana mandra-pahafatiny. Ohatra, ny zavakanto dia nanjary lasa mpanakanto, na dia mety hiova aza ny endrika zavakanto. Mpana hosodoko i Frida, raha i Salma kosa dia naneho ny talentany amin'ny maha-artista azy.